अरुलाई तीब्र अबिश्वास र सन्देह गर्नेलाई बिर्सने रोग
एउटा अध्ययन अनुसन्धानका अनुसार अरु मानिसलाई तीब्र अबिश्वास सहित सन्देह गर्ने र अरुको उदेश्य सँधै नै स्वार्थी हुन्छ भनेर सोच्नेलाई बिर्सने रोग ‘डिमेन्सिया’ लाग्ने बढी जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । बेलायतमा ६५ बर्ष उमेर पार गरेका हरेक तीन जनामा एकजनालाई यस्तो रोग अर्थात् डिमेन्सिया लाग्ने गरेको त्यो अध्ययनले देखाएको छ । यो अध्ययन ६२२ जना स्वयमसेवी मानिसहरुका बीचमा गरिएको बताइएको छ । अध्ययनकर्ताहरुले ती ६२२ मानिसहरुमा रहेको शंकालुपनको तहलाई डिमेन्सियासँग जाँच्ने प्रयास गरेका थिए । अध्ययनपछि उनीहरुले निष्कर्श निकालेका छन् कि अरुलाई अति अबिश्वास र शंक ागर्नेहरुमा डिमेन्सिया रोग लाग्ने खतरा दोब्बर हुन्छ । अध्ययनकर्ताहरु भन्दछन् डिमेन्सिया रोग बुझ्न मद्दत गर्ने यस्ता अध्ययनहरु निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छन् तर यस सम्वन्धि अभैm बृहत अध्ययन हुन भने भने बाँकी नै छ ।
डिमेन्सिया रोग लागेमा कुनै पनि ब्यक्तिको स्मरण शक्तिमा कमी आउने,सोच्ने गति, मानसिक उर्बरता, भाषा र बुझाई तथा न्याय गर्ने क्षमतामा पनि ह«ास आउने गम्भीर कुरा अध्ययनले औंल्याएको छ । बृटेनको बृटेनको ‘अल्जाईमर्स सोसाइटी’का अनुसार, माथि नै उल्लेख गरिया,े हरेक ६५ बर्ष उमेर पार गरेका ३ जनामध्ये १ जनालाई यो ‘डिमेन्सिया’ रोग लागेको पाइएको छ ।सन् १९९८ मा ७१ बर्ष सरदर उमेरभएका स्वयमसेवीहरुलाई दुइवटा बाक्यहरु दिइएको थियो ।
ती बाक्यहरु थिए : ‘मेरो बिचारमा मानिसहरु अघि बढ्नलाई भूmट बोल्छन’ र ‘अरुलाई बिश्वास नगर्नु नै सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने वाक्यांशलाई नम्बर दिन भनिएको थियो । यूनिभर्सिटी अफ वेस्टर्न फिनल्याण्डका बैज्ञानिकहरुका अनुसार ती मध्ये ४६ जना मानिसमा त्यस पछिको दशकमा डिमेन्सिया भएको थियो । तीब्र नकारात्मक र शंकालु बिचार राखेका १६४ मानिसमध्ये १४ जनालाई पनि डिमेन्सिया भयो र कम शंकालु २१२ मध्येका ९ जनामा पनि डिमेन्सिया भएको थियो । डा. आना माइजा टोलप्पानेनले यस अध्ययनको नेतृत्व गरेकी थिइन् । उनका अनुसार यो अध्ययनको परिणामबाट मानिसको जीवन र ब्यक्तित्वप्रतिको दृष्टिकोणले उनीहरुको स्वास्थ्यमा असर पर्दछ भन्ने प्रमाण थप भएको छ । परिणाम बारे थप निष्कर्श निकाल्दै उनले भनिन् – डिमेन्सियाको सबभन्दा ठूलो खतरा भनेको उमेर नै हो ।
डा. टोलप्पानेनले भनेकी छन् कि बिभिन्न ब्यक्तित्वका मानिसहरु दिमागका लागि फाइदादायक हुने बिभिन्न गतिबिधि र स्वास्थ्य खानेकुरामा तथा सामाजिक बौद्धिक गतिबिधिमा कम या बढी संलग्न हुने गर्दछन् । उनका अनुसार मानिसको ब्यक्तित्व मानिसको मस्तिष्कको भौतिक स्वरुप या त्यसभित्रको तत्वमा आएको परिवर्तनबाट प्रभावित र प्रस्तुत हुन सक्छ । अनि मस्तिष्कमा भएको संक्रमणले सन्देह र नराम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई नै दर्शाउँदछ । अल्जाइमर्स रिसर्च यूकेमा कार्यरत डा. सिमन रिडले भनेका छन् : ‘अरुकाप्रति तीब्र अबिश्वास गर्ने मानिसहरुमा डिमेन्सिया शुरु भइसकेको पनि हुन सक्छ र त्यो खतराको कारक या डिमेन्सियाको लक्षण दुबै हुन सक्तछ’ । तर अध्ययनले अन्य सामाजिक आर्थिक कारकहरु, उमेर, यौन स्वास्थ्य स्थिति, चुरोट या मदिार पिउने जीवन शैली जस्ता कारहरुलाई भने यो अध्ययनले नसमेटको उनले बताइन् ।
हुन पनि यो अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यलाई अझ बृहत रुपमा अध्ययनमा लैजानु असाध्यै महत्वपूर्ण छ । अल्जाइमर्स रिसर्च यूकेका प्रमुख डा. सिमन रिडलेले भने डिमेन्सियाग्रस्त मानिसको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो रोगलाई के केले असर पार्छ भन्ने प्रमाण जुनसुकै थपिए पनि त्यो स्वास्थ्योपचारका लागि फाइदाजनक हुन्छ भनेको छ । अहिलेसम्म गरिएको अध्ययनमा थोरै मानिसहरुमा मात्रै डिमेन्सिया भएकोले उनले अझ ठूलो अध्ययन भएदेखि रोग र शंकालुपनाको प्रस्तावित बिषयका सम्बन्धमा अझ बिश्वस्त हुन सकिने बताइएको छ ।
नया समाजको खोजी गर्दै गर्दाको प्रश्न